Nobahanan’ny mpanao sivana aterineto Rosiana ny tranonkalan’ny Ekipa Navalny · Global Voices teny Malagasy
Tondroin'ny fanjakana ho "fikambanana-mpitrifana" ny tambajotran'ny hetsika sy fanentanan'i Navalny
Voadika ny 02 Aogositra 2021 5:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, Esperanto , Nederlands, English
Pikantsary avy amin'ny globalcheck.net mampiseho ny endrika fahazoa-miditra amin'ny navalny.com tao anatin'ny 24 ora mandrapahatonga ny tamin'ny 16:20 GMT+1 (18:20 ora Moskoa) tamin'ny 26 Jolay 2021. Tsikaritra ny fihenan'ny fidirana mikantsana manodidina ny tamin'ny 9:00 GMT+1 (11:00 ora Moskoa).
Nobahanan'ny Roskomnadzor, sampandraharahan'ny governemanta rosiana misahana ny fanarahamaso sy ny fanivanana ny aterineto rosiana, ho an'ireo mpisera ao Rosia ny tranonkalan'i Alexey Navalny mpitarika ny fanoherana ao am-pigadrana amin'izao fotoana.
Tamin'ny 26 jolay, nitatitra tao amin'ny Telegram ny ekipan'i Navalny fa nampiana ho ao anatin'ny lisitry ny tranonkala voabahana ao Rosia miaraka amin'ireo tranonkalan-tambajotram-pirenena ao amin'ny biraom-panentanana ho an'i Navalny miisa 40 hafa ny tranonkala fototra, navalny.com, sy ny free.navalny.com. Nanamafy ny fitaratry ny lisitra mainty, velomin'ny vondrona mpandala ny zo ankihihihy Roskomsvoboda, fa nampiana ho ao anaty lisitra ny maro amin'ireo tranonkalan'i Navalny tamin'ny 26 jolay, mitondra ny isan'ny tranonkala rehetra mifandraika amin'i Navalny ho 79.
Pikantsary avy amin'ny ekipa Navalny ho ao amin'ny Telegram channel tamin'ny 26 Jolay 2021 ahitana ny hafatra am-pitety milaza fa nosakanana ny tranonkalan'i Navalny.
Dika: “Nobahana ity fatsakana ity (resource)! Mifototra amin'ny Hitsivolan'ny Governemantan'ny Federasiona Rosiana tamin'ny 26 Oktobra 2012 No. 1101 sy mifanaraka amin'ny Andininy No. 9 sy 151 amin'ny Lalàna Federaly tamin'ny 27 Jolay 2016 No. 149-FZ “Momba ny Torohay, teknolojian'ny torohay ary ny fiarovana ny torohay”, Miaty torohay izay voarara ato amin'ny Federasiona Rosiana ity fatsakana ity!”
Araka ny Roskomnadzor, nanao ny asany izy araka ny fangatahana avy amin'ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana Rosiana,na dia mbola tsy fantatra aza ny antony ofisiany nahatonga ny fanakanana. Tamin'ny volana jona tamin'ity taona ity, notondroin‘ny Fitsarana ao an-tanànan'i Moskoa ho “fikambanana mpitrifana” ny Orina Mpanasoa Miady amin'ny Kolikoly (FBK), ny Orina Mpanasoa Miaro ny Zon'Olompirenena an'i Alexey Navalny, sy ireo foibem-panentanany isa-paritra, ka mampitsahatra ny asan-dry zareo ao Rosia.
Nilaza ireo mpikatroka ao amin'ny ekipan'i Navalny fa efa “nantenaina” izany hetsika izany ary nampirisihana ny mpanohana hiditra amin'ny blaogin'ilay politisiana amin'ny alalan'ny fampiasa finday natokana ho amin'izany, izay mbola azon'ny mpisera rosiana idirana satria “tsy misy lalana ahafahana mibahana azy ireny.” Nanao tatitra ihany koa izy ireo fa mbola azo idirana ny tranonkala tetikasam-pisoratana hifidy, Umnoye Golosovanie (VoteSmart), ary ampirisihana ny mpisera hisoratra anarana eny. Mbola azo idirana ihany koa ny fantsona YouTube an'ny ekipan'i Navalny.
Nahatsikaritra ny Roskomsvoboda taty aoriana fa misy tranonkala hafa maromaro voabahana ihany koa, tafiditra amin'izany ireo velomin'ny mpiara-miasa amin'i Navalny to an'i Lyubov Sobol sy Leonid Volkov, soboll.ru sy leonidvolkov.ru. Anisan'ny rohy URLs anaty lisitra mainty ny tranonkala ofisialin'ny Orina Mpanasoa Miady amin'ny Kolikoly (fbk.info), Sendikàn'ny mpampianatra (teachers-union.ru) ary sendikan'ny dokotera (alyansvrachey.ru)—fikambanana miara-miasa amin'ny hetsika Navalny, ary ireo tranonkalan'ny tetikasa miady amin'ny kolikoly hafa an'i Navalny efa ela RosZKH sy RosYama.
Eo ampanefana ny famonjana roa taona sy tapany i Alexey Navalny rehefa nampiharin'ny Fitsarana ao Moskoa tamin'ny febroary 2021 indray ny didy manonona ny lazaina ho fanitsakitsahana ny (sazy mihantona) tamin'ny 2020 rehefa sitrana tamin'ny lazaina ho fanapoizinana tany amin'ny toeram-pitsaboana alemà.